Huawei dia manolotra ny Nova sy Nova Plus ao amin'ny IFA 2016 | Androidsis
Manuel Ramirez | | Huawei, IFA, About us
IFA 2016 dia mitarika famelabelarana marobe ary tonga ny fotoana handraisan'ny Huawei anjara. Tao anatin'izay taona lasa izay izay nampiasan'ny mpanamboatra sinoa ity foara ity any Berlin hanombohana ny andiany Mate, ka antenaina fa ho hita anio izany mankany amin'ny Mate S. Fa tsy ho toy izany, fa niditra fitaovana vaovao roa: ny Nova sy Nova Plus.
Ireo finday roa ireo dia tonga hanohy ny finday finday misy Huawei. Toa an'i a ny Huawei Nova kinova kely amin'ny Nexus 6P, raha ny 5,5 ″ Nova Plus kosa dia mety ho ny solon'ny tsipika Mate. Ny mahatsikaiky dia samy hafa amin'ny fahitana ny finday roa tonta, na dia manana izany fitoviana amin'ny anarana Nova sy ny toetra ara-teknika aza izy ireo.
Ny Nova sy Nova Plus dia miavaka amin'ny a famokarana aliminioma misy tsipika madio ary vera 2.5D. Samy manana ny chip Qualcomm's Snapdragon 625 ao anaty vavony, izay safidy tsara ho an'ireo telefaona midadasika ireo. Manana RAM 3 GB ihany koa izy ireo ary fahatsiarovana anatiny izay mahatratra hatramin'ny 32 GB. Manana batterie ho an'ny voalohany amin'ny 3.020 mAh ary 3.340 mAh ho an'ny faharoa. Araka ny voalazan'ny Huawei tenany ihany, ny mpampiasa dia mety manana fe-potoana maharitra roa andro.
Nova dia manana fakan-tsary 12MP miaraka amin'i autofocus detection phase ary microns 1.25, raha ny Nova Plus kosa dia mahazo fihatsarana amin'ny fakan-tsary miaraka amin'ny 16 MP sy ny fampiorenana ny sary optika. Samy manana fakan-tsary 8MP eo aloha izy ireo, ka mampatahotra ho an'ny selfie.
Ao amin'ny Nova no hananantsika ny emahazatra USB Type-C ary ny toerana misy ireo sensor amin'ny dian-tanana ao ambadiky ny telefaona roa. Ka manana finday avo lenta tsara amin'ny lafiny rehetra izahay. Izy ireo dia manasongadina EMUI 4.1 miorina amin'ny Marshmallow, izay misy ny mavesatra mavesatra an'i Huawei.
Te hampiseho endrika lozisialy toa ny Knuckle Sense ilay mpanamboatra sinoa, izay mamela fihetsika fampidirana miaraka amin'ireo knuckles sy rantsan-tànana. Raha ny fahitana azy dia afaka manavaka ny fahasamihafana eo amin'ny knuckles sy ny rantsan-tànana ny fampirantiana amin'ny fandrefesana ny fitantanana herinaratra amin'ny hoditra. Amin'ity karazana fihetsika ity dia azonao atao ny mandefa ny fakantsary na maka pikantsary amin'ny ampahany manokana amin'ny efijery.
1 Huawei Nova Famaritana
2 Famaritana Huawei Nova Plus
Huawei Nova Famaritana
5,5-inch Full HD efijery 1500: mifanohitra amin'ny efijery 1
650GHz chip Snapdragon 2 an'ny octa-core
32GB fitehirizana anatiny mivelatra hatramin'ny 128GB amin'ny microSD
Fakan-tsary 12 MP aoriana
Famaritana Huawei Nova Plus
Efijery FullHD 5,5-inch
Snapdragon 650 octa-core puce dia miorina amin'ny 2GHz
Fahatsiarovana anatiny 32GB mivelatra amin'ny microSD 128GB
Fakan-tsary 16 MP aoriana misy stabilisation sary optika
Huawei dia nanambara fa ny Nova sy Nova Plus dia ho hita any Eropa amin'ny volana ambony amin'ny vidiny € 429 ho an'ny Nova Plus, raha ny Ho tonga amin'ny vidiny € 399 i Nova.
Smartphone roa mahaliana miaraka amina endrika manokana ao ambadika mitondra antsika ny fahatsiarovana ny Nexus 6P miaraka amin'ilay fehiloha ambony amin'ny mainty izay mametraka anao amin'ny fitaovana iray izay samy hafa be amin'ny hafa. Izy io dia ao amin'ny Nova Plus izay nesorina ilay soritra ambony mba ho eo anoloan'ny terminal kanto kokoa amin'ny farany ary tsy manao fanatanjahan-tena toa ny fisehoan'ny Nova, ka Huawei dia mitady karazana mpampiasa roa samy hafa amin'ny lafiny fahitana fa ao anaty dia manana toetra mitovy amin'izany.
Raha mitady terminal tsy mihoatra ny 400 € ianao, ny Huawei Nova dia terminal izay tsy azo hamaivanina ary maro hafa avy amin'ny mpamokatra terminal fahatelo lehibe indrindra manerantany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei mandefa telefaona midadasika Nova sy Nova Plus ao amin'ny IFA 2016
Lenovo dia nanambara ny Yoga Tab 3 Plus sy ny Yoga Book